Soomaaliya oo loogu baaqay inay waxbadan ka qabato xuquuqda aadanaha - BBC News Somali
Soomaaliya oo loogu baaqay inay waxbadan ka qabato xuquuqda aadanaha
Image caption Bahame Tom Nyanduga, Khabiirka madaxa bannaan ee Qaramada Midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka Soomaaliya.
Khabiirka madaxa bannaan ee Qaramada Midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka Soomaaliya, Bahame Tom Nyanduga oo weriyayaasha maanta kula hadlay magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in loo baahan yahay in dowladda Soomaaliya ay waxbadan ka qabato dhinacyada kala gedisan ee xuquuqda aadanaha.
Mr Nyanduga ayaa sheegay inuu beesha caalamka ku booriiyay inay ka caawiyaan Soomaaliya xoojinta hay'adaheeda maamul, kuwa cadaaladda iyo kuwa amniga kahor doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan dhamaadka sanadka soo socda ee 2020.
"Soomaaliya waxay lixdii sano ee la soo dhaafay horumaro ka samaysay siyaasadda, dhaqaalaha, arimaha bulshada iyo xuquuqda aadanaha, balse waa in waxbadan laga qabto dhinacyadaasi" ayuu yiri khabiirka madaxa bannaan.
Waxa uu Mr Nyanduga sheegay ay Soomaaliya wajahayso caqabado ay kamid yihiin khilaafka siyaasadeed ee sii socda, hayb sooca iyo shaqo la'aanta. Waxa uu dareen ka muujiyay illaa hadda in aan la dhisin guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha.
Xaaladda xuquuqda aadanaha ee Mandera
Sidoo kale khabiirku waxa uu ka hadlay dib u eegista dastuurka iyo sharciga doorashooyinka ee hadda gacanta lagu hayo isagoo soo tilmaamay in illaa hadda aan la isla meel dhigin farsamooyinka la xiriirra damaanad qaadka qoondada haweenka iyo qabaa'ilka laga tirada badan yahay.
"Waxaan ogaaday in horumar laga sameeyay hannaanka socda ee dib u eggidda dastuurka, balse waxaan hoosta ka xariiqayaa in illaa iyo hadda aanay jirin wax damaanad qaadaya ka qeybgalka doorashada soo socota ee dumarka, qabaa'ilka la takooro, barakacayaasha, naafada iyo dhalinyarada,"ayuu yiri Mr Nyanduga.
Mar uu ka hadlayay weriyayaasha iyo xoriyadda hadalka ayuu sheegay inay sii socdaan xariga iyo xadgudubyada lagula kaco suxufiyiinta wadanka oo dhan isagoo si gaar ah u soo qaaday Jubaland oo dhawaan doorashooyin at ku soo fool leeyihiin.
Mr Nyanduga oo 12-kii maalmood ee u dambeeyay safar ku tegay magaalooyinka Nairobi, Muqdisho iyo Hargeysa ayaa warbixintiisa ugu dambeysa waxa uu u gudbin doonaa golaha xuquuqda aadamaha ee Qaramada Midoobay bisha September ee sanadkan.